निजी उद्योग फस्टाइरहँदा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग घाटामा ? – Nepal Japan
निजी उद्योग फस्टाइरहँदा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग घाटामा ?
नेपाल जापान २३ असार १७:४०
विश्वकै उत्कृष्ट प्रविधि जडान भएको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको अवस्था छ । यसको प्रमुख कारण भने कोरोनाको असहज परिस्थितिलाई बताइएको छ ।
गत आव ०७६/७७ मा करीब रु २५ करोड बराबर आर्थिक घाटा भएको उद्योगमा चालु आव ०७७/७८ मा समेत करीब रु २५ करोड बराबरको आर्थिक कारोवार नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उद्योगले जनाएको छ ।
कारोनाको असहज परिस्थितिका कारण उद्योगमा हुने उत्पादन लागतमा वृद्धि, उद्योग सञ्चालन खर्च अन्य समयको तुलनामा बढी मूल्य पर्ने साथै योजनाअनुसार सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री नभएकाले उद्योगलाई कारोनाको अहसज स्थितिका कारण आर्थिक रुपमा नोक्सानी पुगेको उद्योगका कामु प्रबन्धक (अर्थ) रामबाबु शाहले जानकारी दिनुभयो ।